MiHD/ Ifile မှ ဒေါင်းလုဒ်ချနည်း - မြန်မာမိသားစုဖိုရမ်
MiHD/ Ifile မှ ဒေါင်းလုဒ်ချနည်း
17-11-2007, 12:19 PM
ဒေါင်းလုဒ်မန်နေဂျာတွေနဲ့ ဖိုင်တွေကို ဒေါင်းလုဒ်လို့ရတဲ့
မီဂါ အပ်လုဒ်တို့လို အိုင်ပီ၊ နိုင်ငံတွေကို ကန့်သတ်တာမျိုးမလုပ်ထားတဲ့
ပထမဆုံး ဒီလင့်လေးကို Copy ကူးပြီး အင်တာနက်ကြည့်ဆော့ဖ်ဝဲရဲ့ အသစ်တစ်ခုမှာ Paste ချလိုက်ပါ
အင်တာနက်ကို အမြန်ဆုံးနဲ့ အကျိုးအများဆုံးဖြစ်အောင် အသုံးချနိုင်ကြပါစေဗျာ...
Last edited by everlearner; 17-11-2007 at 12:22 PM..
အောက်ပါအသင်းဝင် 12 ဦးတို့မှ everlearner အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ကိုဂျိန်း, ခင်မျိုးစစ်, တာတာ, မိုးတိန်, သရက်သီး, အိုက်ထွန်း, မောင်သံသရာ, မြတ်သူအောင်, hponemawlwin, htun30, nightman1190, zo
17-11-2007, 12:27 PM
အခုအော်နေတာက မြန်မာပြည်ကလူတွေ Midh.net ကိုသုံးလို့မရဘူးတဲ့ဗျာ။ ဟုတ်လားမသိ.......ကျနော်ကတော့ Mediafireနဲ့ Mihd.netကိုတော်တော်သုံးဖြစ်တယ်......အခုတော့ Mediafireက error တက်နေတယ်ဗျာ........
အောက်ပါအသင်းဝင်6ဦးတို့မှ ဂျစ်တူး အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ခင်မျိုးစစ်, သရက်သီး, အိုက်ထွန်း, မောင်သံသရာ, mars, zo
အဆင့်နှစ်မှာ တစ်နေကြတာ ဖြစ်မယ်ဗျ
အဆင့်နှစ်မှာ ကျနော်လည်း ပထမဆုံး အကြိမ်တုန်းက ရွာလည်ခဲ့တာ..
အခုတော့ MiHD မှ MiHD ဖြစ်နေပြီဗျာ...
တကမ္ဘာလုံးလည်း အခမဲ့ Hosting မှာ MiHD ကို အများဆုံး တင်နေတာပဲ..
အောက်ပါအသင်းဝင်4ဦးတို့မှ everlearner အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ခင်မျိုးစစ်, အိုက်ထွန်း, မောင်သံသရာ, zo
17-11-2007, 12:54 PM
နည်းမသိလို့ ရွာလည်ပြီး mediafire နဲ့ချလိုက်ရတယ်။ အခုပြောပြထားတဲ့အတိုင်းပြန်လုပ်ကြည့်တော့အဆင်ပြေသားပဲ။
17-11-2007, 01:45 PM
တကယ်တော့ ကျွန်တော်တို့ အစကတဲက MiHD ကနေ ဒေါင်းလုဒ်ချတဲ့နည်းကို ရှင်းပြပေးထားသင့်တာပါ...
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် အခုလည်း နောက်မကျသေးပါဘူး...
အင်း.. ကျနော်လည်းဒီဆိုက်ကိုသုံးဖြစ်တယ်။ ဟိုတစ်နေ့ကတော့.. သူ့ home page ကိုဝင်လို့မရတာ။ ဒီလိုပါပဲ.. အမျိုးမျိုးကိုဖြစ်နေတာပဲ။ တစ်ချို့.. mediafire လင့်ခ်တွေလည်း your-freedom တို့၊ cgi proxy တို့နဲ့ဝင်မှရတယ်။ နို့မို့ဆို... quickkey error ဆိုပြီးဒေါင်းလို့မရဘူး။ ဘန်းကျော်ကတော့ ပညာတွေအမျိုးမျိုးကို ပေးနေတာပဲ။
17-11-2007, 05:19 PM
ဟုတ်လိမ့်မယ်....အဆင့်၂မှာ သူတို့က အပေါ်ကဟာကို သွားသွားနှိပ်တာ နေလိမ့်မယ်.....ဒါကြောင့်ဖြစ်မှာပါ....ကျနော့်အတွက်တော့ Midhnet.က အိုကေပဲ......
ခင်မျိုးစစ်, မောင်သံသရာ, zo
ခုလိုရှင်းပြပေးထားတာ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်......ဒါပေမယ် နယ်သား ဘာဒေါင်းလုပ်မှ မလုပ်နိုင်ဘူးဖြစ်နေတာ....ဟီးဟီး
ပျော်ရွှင်စရာ နေ့ရက်လေး ဖြစ်ပါစေဗျာ.....
အောက်ပါအသင်းဝင်2ဦးတို့မှ Nalthar အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
MiHD & PDF Download
MiHD ကနေ PDF ဖိုင်တွေကို ဒေါင်းလုဒ်ချတဲ့ အခါမှာ အဆင်မသင့်ခဲ့ရင် အင်တာနက် ကြည့်ဆော့ဖ်ဝဲက PDF ဖိုင်ကို သူ့ထဲမှာ ဖွင့်ပေးဖို့ ကြိုးစားတတ်တာမို့ ရပ်သလို ဖြစ်သွားတတ်ပါတယ်...
ကိုဂျိန်း, ခင်မျိုးစစ်, သရက်သီး, zo
20-12-2007, 05:51 AM
ပို့စ် 26 ခုအတွက် 91 ဦးမှ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပါသည်။
ကို အဲဗားရေ.........ကူညီလက်စနဲ့ ထပ်ကူညီပါဦးနော်.........Midh.net ကနေ ဒေါင်းပြီးရင် ဘယ် Player နဲ့ကြည့်ရတာလဲဟင်....ညီကဒေါင်းလုပ် လုပ်ပြီးကြည့်လို့မရ ဖြစ်နေလို့.......ညီဆီမှာက Jetaudio Player ပဲရှိတယ်အစ်ကိုရ... ကူညီပါဦးနော်......... မိန်းမချောချောရပါစေဗျာ ဟီးဟီး
အောက်ပါအသင်းဝင်3ဦးတို့မှ မင်းမင်း အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ခင်မျိုးစစ်, kyawsoeag, zo
Find More Posts by မင်းမင်း
20-12-2007, 06:06 AM
အစ်ကိုက ဘယ်ဖိုင်အမျိုးအစားကိုဒေါင်းလုဒ်လုပ်လဲတော့ မသိဘူး။ ဒါပေမယ့် အစ်ကိုဒေါင်းလုဒ်လုပ်တဲ့ ဖိုင်က pdf ဆိုရင်တော့ Adobe reader, adobe acrobat , foxit reader တွေနဲ့ မှဖွင့်လို့ရမယ်။
ရုပ်ရှင်ဖိုင်ဆိုရင်တော့ ဘာဖိုင်အမျိုးအစားဆိုတာပြောနိုင်ရင် ပိုကောင်းမယ်ထင်တယ်။
အခုလောလောဆယ်တော့ Gom player လေးသုံးကြည့်ပါလား။ ကျွန်တော့်မှာ အရင် ကိုငြိမ်းချမ်းတင်ထားတာလေးတော့ရှိတယ်။ နောက်ပိုင်း ဗားရှင်း အသစ်တွေတောင်ထွက်နေပြီထင်တယ်။ အောက်မှာယူလိုက်ပါ။
သူက video ဖိုင်အမျိုးအစားအများစုကိုဖွင့်နိုင်တယ်။ မဖွင့်နိုင်တဲ့ အမျိုးအစားဆိုရင်လည်း သူပြောတဲ့အတိုင်း လိုတဲ့ codecs ကိုရှာခိုင်းလိုက်ရင် ခဏလေးနဲ့ တွေ့ပြီး သွင်းလိုက်တာနဲ့ ကြည့်လို့ရပြီ။
20-12-2007, 06:21 AM
Originally Posted by မင်းမင်း
ညီအောင်အောင် ပြောသလိုဘဲ မင်းမင်းက ဘယ်ဟာကို မေးတာလည်း။
အကို တင်ထားတဲ့ ရုပ်ရှင်တွေ ဆိုရင်တော့ Winanp Player နဲ့ကြည့်လို့ရတယ်။
မရှိရင် အောက်မှာ ယူလိုက်နော်။
အောက်ပါအသင်းဝင်3ဦးတို့မှ aung myint အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
20-12-2007, 07:37 AM
ကိုအောင်အောင် နှင့် ကိုအောင်မြင့် ကိုကျေးဇူး အရမ်းတင်ပါတယ်....ကျွန်တော်ဒေါင်းထားတဲ့ ဇာတ်ကားက Winanp Player နဲ့ ကြည့်လို့ရသွားပါပြီ.......Gom player နဲ့ ဖွင့်တော့ Сode No တောင်းပါတယ် .... ကျွန်တော်က မထည့်တတ်ဘူး ..ဟီးဟီး
Last edited by မင်းမင်း; 20-12-2007 at 07:37 AM..
အောက်ပါအသင်းဝင်2ဦးတို့မှ မင်းမင်း အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
20-12-2007, 07:44 AM
၀မ်းသာပါတယ် ညီလေး နောက်လိုတဲ့ ဟာရှိရင်ပြောပါ။............................
အောက်ပါအသင်းဝင်2ဦးတို့မှ aung myint အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ပြန်စာ - MiHD မှ ဒေါင်းလုဒ်ချနည်း
အောက်ပါအသင်းဝင်2ဦးတို့မှ wine အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ပို့စ် 447 ခုအတွက် 1,292 ဦးမှ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပါသည်။
အန်... ဘယ်လိုတွေ အခက်အခဲ ဖြစ်နေလို့လဲ။ဘယ်ဘက် အပေၞထောင့်မှာ ဒေါင်းလော့ချရမယ့် ဖိုင်လေးတွေ ပေၞပါတယ်။ သေချာ ပြန်လုပ်ကြည့်ပါဦး။ အဆင်မပြေရင် ပြန်ပြောပါဗျာ။
ကံကြမ္မာကို ကိုယ်တိုင်ပဲ ရေးမယ်။
အောက်ပါအသင်းဝင်2ဦးတို့မှ ခိုင်လင်း အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
Find More Posts by ခိုင်လင်း
requested download link ကို click ပြီးတာနဲ့ Download File ကို ဆက် click ရုံပါပဲ။
ရဗူး ဗျာ ဒီနေရာမှာလည်နေတယ်
အောက်ပါအသင်းဝင်2ဦးတို့မှ ရှင်နေမင်း အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
အဲ့ဒီမှာ request ticket ကို click ပြီးရင်...
download ကို click ရုံပါပဲ။
mihd ဒီဇိုင်းပြောင်းသွားလို့ အရင်ပုံတွေနဲ့ မတူတော့တာပါ။
တခါတလေ text box မှာစာလုံးတွေရိုက်ထည့်ခိုင်းတယ်။
ပေါ်လာတဲ့စာလုံးတွေရိုက်ပြီး request ticket ကို click ရုံပါပဲ။
Last edited by tu tu; 07-10-2008 at 06:21 AM..
ကိုသောင်း, ခင်မျိုးစစ်, နီထွန်းဦး, မောင်သံသရာ, phoetharlay, Starfire, tinkokooo, zo
ဘာမရတာလဲ။ညီလေးဖြစ်နေ တာတွေသေသေချာချာ ရေးပြမှပြောလို့ရမှာပေါ့။အပေါ်မှာ tutu ပြောသလိုတဆင့်ချင် လုပ်ရင်အဆင်ပြေပါတယ်။ညီလေးဆီးမှာဘာတွေပေါ်တာလဲ ဘာတွေပြနေတာလဲပြောမှကူညီလို့ရမှာပေါ့။မ တူးတူး ပြောသလိုလုပ်ကြည့်ပါအုံး။ပြောသလိုမပေါ်ရင်ဘာတွေပေါ်လဲပြောပြလေ။အဆင်ပြေမှာပါ။
အောက်ပါအသင်းဝင်2ဦးတို့မှ winntun အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
26-04-2008, 04:43 PM
ကျေးဇူးပဲ အကို တို့ရေ ညီ အခက်တွေ့နေတာ အခုဒီမှာလာဖတ်မှ သိတော့တယ်။
ပို့စ် 268 ခုအတွက် 841 ဦးမှ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပါသည်။
ရလည်း ရဘူး ....
ဆေးစာအုပ်တွေလဲ ဖတ်လို့ ရတော့ ဘူး ....
[COLOR="Red"][CENTER][SIZE="3"]This, too, will pass ![/SIZE][/CENTER][/COLOR]
အောက်ပါအသင်းဝင်2ဦးတို့မှ စုလေးဝေ အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
Visit စုလေးဝေ's homepage!
Find More Posts by စုလေးဝေ
ညီမလေးရဲ့ အခက်အခဲကို သေချာမေးပေးလေ။
ဘယ်လိုမရတာလဲ ခင်ဗျာ။ Link တွေသေကုန်လို့ဒေါင်းလုဒ်လုပ်လို့ မရတော့တာလား။ ဒါမှမဟုတ် ဒေါင်းလုဒ်ချနည်းကို နားမလည်တာလား။ တင်ပေးထားတဲ့ Link တွေသေကုန်ရင် အသစ်ပြန်တင်ပေးဖို့တောင်းဆိုနိုင်ပါတယ်။ ဒေါင်းလုဒ်လုပ်နည်းကတော့ သေသေချာချာ ရှင်းပြထားတဲ့အတွက် နားလည်နိုင်မှာပါ။ ဖိုရမ်နဲ့ပါတ်သတ်တဲ့ အခက်အခဲများ ရှိပါက အကူအညီယူရင်းအကြံပြုမယ်(ဖိုရမ်မှအခက်အခဲများ) ဆိုတဲ့ကဏ္ဍမှာလည်း သွားရောက်ပြီးပြောပြနိုင်ပါတယ်။ အကူအညီတောင်းတဲ့ အခါမှာလည်း ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ အခက်အခဲကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောပြမှသာ ပြန်လည်ဖြေရှင်းပေးဖို့ပိုပြီးလွယ်ကူမှာပါ။ အဆင်ပြေပါစေ။
သိဘူး ..... Gmail က Download ကို ချရသလို မဟုတ်ဘူး ... ဘယ်လိုကြီးမှန်းကို မသိဘူး....
23-05-2008, 08:16 PM
အဲ့ဒီ ဘယ်လိုကြီးမှန်းမသိတာကို သေချာမပြောပြရင် ဘယ်လိုဖြေပေးရမလဲ ညီမရေ...
mihd လင့်ခ်ကို နှိပ်လိုက်ပြီးရင် အောက်ကလင့်ခ်မှာ ပြထားသလို မမြင်ရဘူးလား။
မရရင် ဘယ်နေရာမှာ မရတာလဲဆိုတာ သေချာမေးပေးပါ။
အရမ်းအားနာပါတယ်....စုက တုံးလွန်းတာပါ.... တော်ပြီ.... ထားလိုက်ပါတော့ ရှင်...tutu ကို တောင်းပန်ပါတယ်...
အစ်မရေ ။ mihd.net link က ဘယ်တော့ပစ်ကလင့်တွေကို ပြောတာလဲ ။ Emergency & Critical Care တော့ပစ်က လင့်တွေတော့ သေကုန်ပြီ ။ ကျွန်တော်အိမ်ရောက်ရင် ပြန်တင်ပြီး ပြင်ပေးပါ့မယ် ။
တခြားတော့ပစ်က mihd.net link တွေက အများအားဖြင့် မသေသေးပါဘူး ။ လင့်သေနေတဲ့ပို့စ်တွေကလည်း ဒေါင်းလုဒ်စင်တာလင့်နဲ့ တွဲထားတော့ mihd.net link က ဒေါင်းလုဒ်မလုပ်လို့ သေကုန်တာများတယ် ။ ဒေါင်းလုဒ်အဆင်မပြေတဲ့ ပို့စ်တွေရှိရင် ပြောပါ ။ ကျွန်တော်အတတ်နိုင်ဆုံး ပြင်ပေးပါ့မယ် ။
ဟုတ်ကဲ့ဦးဦး .... စုက ဆေးပညာစာအုပ်ထဲက Pocket of Medicine ကို လိုချင်တာပါ...
23-05-2008, 10:59 PM
အောင်မလေးဗျာ ။ ကျွန်တော့်ကို ဦးဦးတဲ့ ။
အစ်မပြောတဲ့ စာအုပ်တခါတော့ ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ဖူးတယ် ။ အခုမှ အတန်းပြီးလို့ ။ အိမ်ရောက်ရင် စက်ထဲမွှေကြည့်လိုက်အုံးမယ် ။ ဖိုင်တွေ ပျက်သွားတဲ့အထဲတော့ မပါလောက်ပါဘူး ။ မရှိရင်လည်း ပြန်ရှာပေးပါ့မယ် ။
ကိုဂျိန်း, ခင်မျိုးစစ်, မောင်သံသရာ, zo